PART-2: Qaalluu Kuusaa Strikes Back – Response to Aite Getachew Redda aka the Nutcase Neftegna
Posted: Waxabajjii/June 26, 2013 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (5)
Part-1 can be read here.
Jun 27, 13 at 12:09 am
Obbo Qaaluu, Uulfadhu Dabtara Rada fi kan isa fakkatanif Afaan isaanitin Barnoota garii keenuu keetif !!!…..
Jun 27, 13 at 10:51 am
Qallu thank you so much for falsifying the hasty conclusions of Aite getachew Reda. The evidences he presented to conclude that Oromos have wider differences is laughable. The Oromo people was using decentralized system of governance even before the invasion of Ormomia by Abysinia. Different Oromo clans were being led by local Geda governors. The Oromo people have no strong central mass media even today. These had negative impact on centralizing the Oromo language. Every body knows that Amharic was serving as the only national language for many years. This is one of the main reasons for Amharic to be more or less similar across all Amhara areas than Oromiffa is in Oromia.
Jun 27, 13 at 10:55 am
Amharas were controlling central government which helped them to standardize and centralize their culture and language. The Oromo people has not got such opportunity even today. Controlling central power is key to standardize once language.
Jun 27, 13 at 7:59 pm
Obboleessa kiyya obboo Qaalluu Kuusaa,
kee kutaalee lamaanuu dubbiseen jira. Hedduun itti-gammade. WAAQNI
gurraachi garaa garbaa, leemmoon garaa taliilaa waan hundaanuu si haa
gammachiisu! “Obboo”* Geetaachaw Raddaa kanaa fi kanneen akka
isaatiif deebii kennuun sonaan nama qaneffachiisa. Obboleesso, nama
daran gadibu’eef, maal jedhaniitu deebisuufi? Ati garuu, otoo akka isaa
gadi hin bu’in, olbaatee Gaara Baatuu faa kortee sirriitti deebifteefii
jirta. Namni kun qaamaan bardhibbee 21-ffaa keessa yoo jiraatu, qalbii
fi sammuudhaan bardhibbee 14-ffaa keessatti kan argamu. Kanaaf: seenaa,
aadaa, afaan, mirgaa fi haqa uummata Oromoo irratti yaada jajallaa fi
duubbatti-hafaa qabaachuu dandaye. Kana callaa otoo hin taane, yaada
wallaalaa fi raatuun tokko dhiyeessuu nutti dadarbate. Yaada kana nama “ani nan qaroome”, “ani biyya qaroome Ameerikaa keessan jira” ofiin jedhu dhiisitii, qeesiin Bichanaa yookaan Saalaa-Dingaay isaanii jiraatullee kan yeroo ammaa kana dhiyeessuu miti.
duudhaa fi afaan Oromoo akka buburree fi tujuba-qabeessa tahe ati
ibsiteefii jirta. Namtichi kun afaan loqoddaa of-keessaa hin qabne,
biyyalafaa kana irra akka hin jirre gunkumaa hin beeku. Ammoo, Afaan
Oromoo loqoddaalee addaddaa qabaatullee akka Oromoon hunduu walii-galuu
dandayu kanneen Faranoonni isaa barreessanillee waa hin ilaalle. Oromoon
waaltina afaanii isa ati ibsite otoo hin qabaatin: Inni Raayyaa-Asibuu
fi Maanya Hindii biraa dhufe, inni Baabilee fi daangaa Sudaan irraa
dhufe walii-gala. Hamma Manjee fi Gondoreen walii-galu san Oromoonis
eessayyuu haa dhufuu walumaaf-gala. Kun dhugaa ijaa babbaasaa lafa jiru.
Inni waayee loqoddaalee Afaan Xaaliyaanii faa, Afaan Jarmanii faa
keessatti argamu otoo kan beeku tahee, kana hundaa hin dhama’uuyyu.
Ilaamee, Jarmannoonni naannoo Muunikii fi naannoo Hamburgii yookaan
Barliin jiran yoo loqoddaalee ofii qofaan walitti haasawan matumaa walii
hin galani. Afaan Jarmanii isa waalteffameen waliif galu. Egaa kun
Biyya Jarmanii isa karaa saayinsii fi teeknolojiitiin samii tuqe
keessatti. Lafa Biyya Jarmanii xiqqoo san keessatti.
Oromoo buburree duwwaa otoo hin taane, hedduu, hedduu gabbataa dha.
Garagarummaa lafaa (baddaa, baddadaree fi gammoojjii) sanitu aadaa
buburree, gabbataa fi boonsisaa akka sabni Oromoo qabaatu isa taasise.
Fakkeenyaaf: sirboota Oromoo kanneen Oromiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa
Kibbaa qofa otoo hin taane, haa jennu kanumti godina Wallaggaayyuu
baay’ee dha. Kan Oromiyaa Waltajjii, Arsii yookaan Harargee faas
akkanuma. Maal “obboo” G. Raddaa akkuma isaanii akka “iskistaa”
callaa ragannu fedha moo? Akkuma isaanii akka baaqqee (naxalaa) duwwaa
uffannu barbaadaa? Ee, warri uffata ofii keessaa halluuwwan addaddaa hin
qabne, asiin baatus adii, achiin baatus adii “qofa” warri
uffatu kun fakkeenyaaf mee, Harargee yookaan Baale-Arsii haa deemu.
Ameerikaa Laatinii faa, Sarbiyaa, Romaaniyaa, bulgaariyaa, Hungaariyaa
faa, Afrikaa Lixaa faa, Biyya Hindii faa mee haa dhaqu! Yoosuu aadaa
uffannaa Oromoo miidhagaa, bareedaa fi tujuba-qabeessa kana argaa!
Qaalluu Kuusaa, ergan hammana waa jedhee mee yaada tokko callaan as
irratti siif dhiyeessa. Afaan Amaaraa keessatti jechoota Afaan Oromoo
tokko tokko kenniteeti jirta. Kun mishaa dha. Garuu, jechoonni kun otoo
akkuma Oromoon barreessutti qubeen barreeffameeyyi gaarii dha. Akkanuma
waraqaa Afaan Ingiliziitiin dhiyeessinu keessattis jechoota Oromoo
qubeen kennuun bayeessa. Kunillee aadaa fi seera barreessitoota
saayinsii gamataati (“social science”). Barreeffata kee isa kutaa lammaffaa kana keessatti kanneen kaafte: “waankee, dirritoo, ragada, shaggooyyee, leexoo, gugsii, guchii, dhangalaasaa, taftaffii, sussukkii (suksukkii)” faa jechuu kooti.
* Jecha Oromoo isa “obboo” jedhamu kana “Atoo”
G. Raddaa kanaaf oolchuun danuu natti ulfaate. Kabaja jechi Oromoo kun
qabu ati sirriitti beekta. Kanaafan jecha keenya kana cuccobduu
keessatti galchuun dhimma ittiin baye-kaa.
Jun 28, 13 at 2:49 pm
Obboo Qaalluu Kuusaa fi warra kaan,
Barreeffata kanaa gaditti agartan kana kaleessan gara mandhee keenya raajeffatamaa, “Gadaa.Com”-tti ergee ture. Garuu, isaan erge sana keessaa wanna xiqqashoo takkatu dabruu dandaye. Inni kaan irraa citeetoo hafe. Maali “obboo” G. Raddaa fi sheexanoota isaanitu na jalaa ciccire moo? Mee waan hundaafuu isan kaleessa erge sana armaan gaditti ilaalaa!